China 1.6m inonyungudika-yakaputika jira rekugadzira mutsara fekitori nevatengesi | Hongli
* Chigadzirwa chekugadzira kubva ku1500kg, iro chairo dhizaini yekushandisa inoenderana nemuchina we extruder uye unonyungudutswa nemhepo yakadururwa.
5.Product Yakakura: 1600MM
6.Production Kugona: 1500KG / 24Hours
7.Akatumirwa Max. Speed: 15M / Minute
8.Total Simba: 600KW
1.90 Koriera Imwe Kuwedzeredza: 1set
6.Net Chaja neHydraulic Double Piro Isiri-Stop Type
7.Electrostatic Electret Chishandiso
8.Servo isingafungidziki uye yekucheka nhumbi
9.Roots blower uye kuyamwa Fan system
10.Automatic Kushambadzira uye Kudzosera mudziyo
11.Siemens PLC inodzora system.
2.Free Spare Zvikamu: Dzimwe nzvimbo dzeWorn sechibatanidza, kupisa ndiro, nezvimwe.
Yakasarudzika jekiseni rakananga uye kudzorera yakanyungudutswa-yakaputira mitsara yekugadzira yevatengi vane yakatarwa kubva ku400mm-1600mm. Mutsetse wekugadzira unodzokorora unogona kushandiswa kwete kungoita mukugadzirwa kweakanyungudutswa-machira machira, asi zvakare kugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirisa zvemvura nezvinogadziriswa zvemhepo. Liquid filters zvinhu zvinonyanya kushandiswa muminda yekurapa kwemvura, peturu uye makemikari indasitiri, ine yunifomu chimiro, yakakwirira filtration kurongeka, pachena maitiro, uye yakasimba yekusvibisa inobata kugona uye yakareba basa rehupenyu. Mhepo dhizaini zvinhu zvinonyanya kushandiswa mumhepo kuchenesa masisitimu, kusanganisira asi isingagumiriwi mukati, yekuchenesa mhepo, yemhepo mhepo yekuisa fetera, nezvimwewo zvine zvakanakira pamusoro uye yakakwirira guruva kukwanisa.
Muchina uyu haugone kugadzira chete zvigadzirwa zvemagetsi, asiwo isina-yakarukwa ayo ari mukobvu. Nekushandura kureba kwekufamba-famba nekudzoka, zvakare nekumhanyisa, mutsara wekugadzira unogonesa unogona kuita kuti iyo isina-yakarukwa ive yakakura. Ipapo, ichi chinyorwa chinogona kushandiswa kugadzira jira rinodziya, kugadzira iro rakadonha uye chimwe chinhu kuti vanhu vadziyirwe.
Nenzira inoshamisa, mazuva achangodarika, mainjiniya ekambani yedu ari kuronga kugadzira mvura yekugamuchira mucheka weMahara diapers. Uye ivo vakawana kubudirira kunoshamisa. Iyo yekugadzirwa iyo yekudzokorora kugadzirwa tambo yakagadzirwa inogona nyore imbibe mvura. Saka basa redu rekudzokesa kugadzira tambo rakasiyana-siyana. Mumazuva anouya, kambani yedu yekambani yehunyanzvi ichavandudza basa rakawanda remutsara wekugadzira mutsara.
Kunze kwekunyungudutswa-yakarukwa yekugadzirwa kwemucheka mutsara, kumeso kwemashini muchina zvakare kambani yedu inogadzirwa. Sekureva kwemutengi, kambani yedu inogona kupa mhando dzakasiyana dzemaski yekugadzira mashini.